Kama bixi kartid!
Kama bixi kartid! 1 sano 8 bilood ka hor #1245
Marka aniga P3D v3 waxaan rakibay qaar ka mid ah diyaaradaha iyo muuqaalka muuqaalka.
Muuqaaladu si fiican ayey u shaqeynayaan, laakiin diyaaradaha oo idil ilaa hadda si fiican uma shaqaynayaan.
Anigaa ka aamusi kari karno ... ama marka aan ka baxo, kaliya mile ka dib wadiiqada.
Waxaan isku dayay inaan isku deymiyo xajmiga max iyo "wax ku dhow Zero" (Sry ma hubo waxa la yiraahdo waxa loo yaqaan) hoosta min. iyo max ... Waxna isbeddelin.
Marka hawadu kantaroolayso waxay shaqeynayaan deris (ama aad u adag).
Dhulka oo kaliya ayaa rooggu si fiican u shaqeeyaa.
Iyada oo diyaaradda Diyaaradaha horey loogu sii rakibay Prepar3d wax walba way shaqeeyaan si fiican.
Qof kasta oo dhibanaya?
Kama bixi kartid! 1 sano 8 bilood ka hor #1247
UPDATE: Waxaa la ogaaday in jooqaalkaygu yahay qalad u qalma diyaaradahan. Samee "Null Zone" 1 waana ka fiicnayd.
MY Joystick ma gaadho dhamaadka fiilada buuxa xitaa Null Zone 1.
Iyada oo Keyboard aan wax walba ka shaqeeyo.
Kama bixi kartid! 1 sano 7 bilood ka hor #1288
Adkee culeyska miisaanka ee diyaaradda si aad u madhan. ka dibna isku day inaad la baxsato faashado yar.
Haddii aad ka baxdo dhulka, dhibaatadu waxay ahayd miisaanka.
Kama bixi kartid! 1 sano 7 bilood ka hor #1295
1) Meelaha raadinta Windows 10, ku qor koontaroole. Guji ikhtiyaarka ah Deji USB-ga Isku-xireyaasha. Waxa kale oo aad ka heli kartaa xulkan ku jira guddi-kaan-kumbuyuutarkaaga Windows-ka ee hoos yimaad Devices iyo Printers menu.
2) Haddii aad maamusho ama joystick ku liis garayso, guji, ka dibna guji Properties. Guryaha dhexdiisa, riix hagaajinta goobaha. Riix badhanka calibrate. Raac tilmaamaha si aad u xajiso qalabkaaga.
3) Furi kartoonka simulatorkaaga. Tag liiska xulashadaada. Tag qaybaha loo yaqaan 'Axis'. Xoogaaga X axis Qalabka Aileron. Yabooji Y axis ah si aad u Xajisid Udubyada. Hubi inaad calaamadeyso sanduuqa si aad uga noqotid, si aad dib ugu soo celiso suufku kor u qaado garoonka (sanka) ee diyaaradda. Ku dheji xayawaankaaga badhkeed ama qalab kale oo aad rabto inaad isticmaasho shixnadaha.
4) Tag mashiinka qalabaynta. Hubi in habka duulimaadku u eg yahay mid caadi ah. Ku soo celi si ay u noqdaan kuwo aan caadi ahayn Markaad isku daydo inaad duuliso duulimaadka, waxaad ku hagaajisaa qiimayaasha sida loo baahdo.
5) Sida Gaztop ku xusan, u tag shidaalkaaga iyo miisaanka loo yaqaan "loadload menu" oo hubi inaadan haysan shidaal ama xamuul aad u badan.
6) Ka hor inta aan la qaadin, waxaa habboon in la raaco liiska hubinta ee diyaaradda. Haddii aadan haysan hal, Google One, oo raac.
7) Haddii aad maareysid inaad gashid, laakiin aad u aragto inaad si joogto ah dib ugu soo celiso surwaalka si aad uhesho sanka, waxaad u baahan tahay inaad ku xereeysid furayaasha wiishka dabka (hoosta) iyo wiisharka (wiishka). Hubi in aad mar labaad ku celisid maxadada kaliya si aad u xakameyso badhanka.
Kama bixi kartid! 1 sano 3 bilood ka hor #1377
SkipperLP ayaa qoray: UPDATE: Waxaa la ogaaday in jooqaalkaygu yahay qalad u qalma diyaaradahan mutuelles TNS . Samee "Null Zone" 1 waana ay ka fiicnaatay.
Laakiin sidoo kale waxaad dooran kartaa joystick haddii joystick uusan ku habooneyn wax-qabadka kala duwan ee aad taqaan.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.198